Iindaba - Chamber of Commerce Ukhuphiswano lwamaBhaso
13, OKTOBHA 2020
Umsitho wokuvula we-yun Baituan War kwi-2020 wasungulwa ngo-Agasti 15. Inkampani yenze isicwangciso esicacileyo malunga nale mfazwe, kwaye wonke umntu wasebenza kunye kwaye wasebenza ixesha elongezelelekileyo ukuphumelela imbeko kwinkampani. usete amabhaso.
Ngexesha lemfazwe yegumbi lezorhwebo, amabutho ethu "iindudumo" ibosi nganye yeshishini iyahlangana ukunika iingcebiso kunye nesicwangciso, siyafunda komnye nomnye ukuzomeleza. Bobabini umphathi kunye nabasebenzi bafaka onke amandla abo emfazweni
Kumsitho wokunikezelwa kwamabhaso, iinkqubo ezahlukeneyo ezilungiselelwe nguMkhosi, ukwabelana ngezolawulo kweKomiti yoMbutho yeLegion ephumeleleyo, kunye nenkqubo yokunxibelelana ngemibuzo yolwazi kunye nokuphendula konke kwenza amabhaso acace, amangalisayo kwaye anike umdla. Ukwabelana kwabanini bamashishini, masiqonde ubukho bezikhewu, kulawulo nakubungcali bolwazi banendawo yokuphucula. Le projekthi iququzelelwe yi-Chamber of Commerce yenze amashishini ethu angama-Hebei angaphandle abumbene。
Inkampani yethu ishwankathela olu khuphiswano, itsala amandla abanye kwaye inciphise umsantsa. Kwiinyanga ezimbalwa ezizayo, siza komeleza iqela lethu loshishino kwaye sisebenzise imodeli yethu yolawulo. Usapho lwenkampani yethu luza kujonga ngokutsha. Inqanaba eliphezulu lezakhono zobuchwephesha ukuhlangabezana neMfazwe yeLigi entsha
Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi ngathi, qhagamshelana nathi ukuze usijoyine. Sizimisele ukudibanisa izandla nabantu abatsha abanqwenela ukwenza imodeli yorhwebo lwamanye amazwe kwaye siqonde ixabiso lenkampani kunye nabantu. Siyathemba ukuba phantsi kolawulo lwamaphupha ethu, siya kufezekisa uloyiso lwabathengi bethu, iinkampani kunye nabasebenzi!